"गाजाबाजा" कस्ले किन हेर्ने? | NAJ Entertainment
NAJ Entertainment का लागि गारापारे फिल्मिकिरो को report
गाजाबाजा पछिल्लो समय फिल्म चलाउन राखिनु पर्ने स्टारकास्टहरु बिना बनाइएको चलचित्र थियो। यसमा न सौगात, अनमोल, दयाहाङ्गहरु छन्, न त निश्छ्ल, छबिहरुले निर्देशन गरेका छन्। चलचित्र दुई गाजा खान खोज्ने युवाहरुको कथा होइन, बास्तबिकता हो। कथामा कथाकारले सत्यलाई तोडमोड गर्छ, मीठो बनाउन काल्पनिकता थप्छ, तर गाजाबाजा रियालिटी हो। बिल्कुलै यो ऐना हो समाजको, त्यस्तो समाज जस्को बारेमा खुलस्त रुपमा बोल्न परिवेश १६ वर्ष माथिको हुनुपर्छ भन्ठान्छ सेन्सर बोर्ड।
नत्र १३/१४ को उमेरमै “I confirm I am 18/21 plus” भनेर pom हेर्नेहरुको अगाडि मुजि भन्नलाई parental guidance नै काफी हुन्थ्यो होला। ६-७मा पढ्दा नै हन्टिङ्ग जाने बच्चाहरुको अगाडि joint भर्दै गरेको सिन त्यति आपत्तिजनक ठानिन्नथ्यो होला । भो, यी अन्धा कानुनी कुरालाई यहि बिट मारौ।
चलचित्रमा देखाइएको समयक्रममा मुख्य पात्रले एकपल्ट पनि गाजासेवन गर्न पाउदैनन्। कालो नियत बोकेर नाममा गाँजा छ भनी दुई वर्ष झुलाएकाहरुले एकपल्ट मात्र कथा हेरिदिएको भए निर्माताको लगानी यति समयसम्म फस्दैनथ्यो होला।
निर्देशक तथा लेखक गनेशदेव पान्डे बेलाबेला ट्र्याकलेस भैदिन्छन्, तर कलाकारहरु उनलाई बाटोमा ल्याउछन्। कतिपय घटना जरुरी छैनन् चलचित्रमा र पनि राखिएका छन्। एक दिनको कथा, सानो क्यान्भास भएर पनि यो खडेरी बेलबखत देखिएको हुन सक्छ।
चलचित्रमा प्रयोग गरिएका केही सिम्बोलिक सिनले दर्शकलाई लजिकल हासो हास्न प्रेरित गरेको छ। गर्लफ्रेन्डको कचकचलाई म्युट गरेर Nepalify शैलीमा राखिएको कुकुरको भुकाई जस्ता कैयौ प्लटहरु शसक्त हासो हास्न प्रेरित गराउछन्।
चलचित्र हेरेर केही सिक्ने वा केही देख्ने समुहमा दर्शकहरु बिभाजित छन्। केही सिक्ने, सिकाउने चाह भएको अडिएन्स ग्रुपको लागि गाजाबाजा च्वाइसमा नपर्ला, तर नदेखेको पाटो हेर्ने, समाज बुझ्न चाहनेहरुका लागि गाजाबाजा एक हाई क्वालिटिको ऐना हो – छर्लङ्गै देखिने ऐना।
महिनादिन अगाडि “पद्मावती” बाट पद्मावत बनेको हिन्दी चलचित्र अनावश्यक बिबादमा तानिएको थियो। जस्ले धेरैलाई चलचित्र हेर्न उत्सुक बनाएको थियो। यता गाजाबाजा बनेको गाँजाबाजा पनि दुई वर्ष पछि ढकेलियो नाम बिबाद मै। चलचित्र भित्र बिबादास्पद देखिने दृश्य, संवाद छैन, तर चलचित्र बिकास बोर्डले भने रोकिरह्यो रोकिरह्यो। एकथरी बिचारमा यो गनेशदेवको चलचित्र बिज्ञापन गर्ने उत्कृष्ट टेक्निक हो, झगडा गरेजस्तो गरेर उनले निशुल्क बिज्ञापन गरे भन्न मिल्छ, र यसो भन्दैगर्दा निर्देशक पान्डे रिसाउदैनन् किनकी यो त freedom to express हो ।
एक मध्यमवर्गीय परिवारको युवा (गाँजाको लतमा परेको) को दैनिकी कस्तो हुन्छ होला? भन्ने बुझ्न चाहनेहरुका लागि गाजाबाजा एक उत्कृष्ट किताब हो। आफ्नै उमेरका अरु युवाहरु कसरी बाचिरहेका छन्, हेर्न चाहने युवाहरुको लागि गाजाबाजा एक उत्तम स्कृन हो । युवाहरु माझ यो चलचित्र लोकप्रिय हुनेकुरामा गारापारे फिल्मिकिरो दुबिधा राख्दैन।
Our Son Will Be A Doctor - Story By Santosh Basnet
"She"- A Story Of A College Student | Part 2